Singa 5 amin'ny tolo-kevitra momba ny varotra mahomby | Martech Zone
Alatsinainy Aprily 2, 2012 Alahady, Septambra 30, 2012 Douglas Karr
Vao haingana izahay no niara-nanolotra ny mpanjifanay, TinderBox, Ny Singa 5 an'ny tolo-kevitra momba ny varotra mahomby. Tsotra ny fampisehoana ary nahafinaritra ny valiny. Raha tsorina, mitovy amin'ireo paikady hafa hitantsika… ny fahaizana manoratra tolo-barotra be dia be dia manampy amin'ny famadihana ireo mpanjifany bebe kokoa ho mpanjifa. Rahoviana DK New Media nanomboka voalohany, nandany andro nanoratra tolo-kevitra 20, 30 ary 40 pejy izahay. Ny tolo-kevitray mivarotra izao dia namboarina manokana, fohy ary hatramin'ny farany.
3 Mandehana lavitra amin'ny lakilasy 5 mankany amin'ny marketing mailaka miavaka
Apr 2, 2012 amin'ny 10: 43 AM
Fampisehoana mahafinaritra. Misaotra Douglas fa manohy manampy anay hanova ny toe-tsainay momba ny fomba fisainan'ny mpanjifa 'vaovao'.
Apr 2, 2012 amin'ny 10: 52 AM
Misaotra betsaka tamin'ny teny soa, @ twitter-237502821: disqus!
May 7, 2012 ao amin'ny 5: 16 PM
Mampahafinaritra azy ny mampahafantatra ilay mpandraharaha madinidinika momba ny marketing izay ahafahana manao dokambarotra amin'ny vokatra tsara sy tsotra.